Unlock Hidden Smartphone Features With These Secret Codes Tech News Nepal
पोर्न साइट हेर्ने २० लाख प्रयोगकर्ताको डेटा लिक
मंगलवार, पुष २८, २०७७ २०:३४
अब एउटा डिभाइसबाट एक पटकमात्रै ड्राइभिङ लाइसेन्सको आवेदन
अनलाइन गेमको आम्दानी एक वर्षमै १६४ खर्ब, कसकाे
नेपाली बजारमा यस्तो छ रेडमी र एमआई स्मार्टफोनको
फोनको स्टोरेज फुल भएर दिक्क हुनुहुन्छ ? यसो
गुगल एडसेन्सबाट घरमै बसी यसरी कमाउनुहोस् पैसा
अब मोबाइलबाटै आफ्नो नागरिकताको विवरण सच्याउन मिल्ने
पोर्न उद्योगका लागि गोप्य क्यामेराको प्रयोग बढ्दै, महिला
नागरिक एपका लागि आफ्नै नाममा सिमकार्ड दर्ता गर्न
नागरिक एप प्रयोग गर्न सबैलाई निःशुल्क मोबाइल डेटा
मोबाइलको पासवर्ड वा प्याटर्न बिर्सिनुभयो ? यसो गर्नुहोस्
आजदेखि सुरु भयो टेलिकमको आईपी टिभी, यस्तो छ
अर्काको नाममा रहेको सिमकार्ड चलाउनुहुन्छ ? आफ्नो नाममा
इयरफोनका यी भिन्नता, थाहा पाइराख्नुहोस् काम लाग्छ
यसरी प्रयोग गर्नुहोस् सरकारले ल्याएको नागरिक एप
एन्ड्रोइडका सिक्रेट २५ कोड, जसबाट देखिन्छ फाेनमा लुकेका फिचर
काठमाडौं । तपाईंले प्रयोग गर्ने एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा लुकेर बसेका विभिन्न फिचरबारे जानकारी लिनका लागि सिक्रेट कोड महत्वपूर्ण हुन्छन् । जसमार्फत तपाईंले आफ्नो मोबाइलको अवस्थाको समेत जानकारी राख्न सक्नुहुन्छ ।
कतिपय अवस्थामा त तपाईंले मोबाइलमा भोग्ने समस्या समाधानमा समेत यस्ता कोड सहयोगी माध्यम बन्न सक्छन् । त्यसैले आज हामी तपाईंलाई आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइलमा लुकेर बसेका विभिन्न फिचर पत्ता लगाउन आवश्यक कोडहरुको बारेमा बताउँदै छौं ।
यहाँ उपलब्ध कोड सामसङ, मोटोरोला, एसटीसी, सोनी, एलजी, सोओमी, ओप्पो, भिभो, पानासोनिक, ह्वावे, लाभा, माइक्रोम्याक्सका साथै अन्य थुप्रै चिनियाँ स्मार्टफोन ब्राण्डमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर, सबै फाेनमा सबै कोडले काम नगर्न पनि सक्छ ।
नोट : यी उल्लेखित कोड प्रयोग गर्दा आउन सक्ने समस्या प्रति भने ध्यान दिन जरुरी छ । त्यसैले यदि तपाईं नयाँ हुनुहन्छ भने कुनै जानकार व्यक्तिसँग बुझेर मात्र यी कोड प्रयोग गर्नु तपाईंका लागि उचित हुनेछ ।
यस्ता छन् एन्ड्रोइड फोनका सिक्रेट कोड
*#*#4636#*#* यो कोड फोनका महत्वपूर्ण जानकारी लिनका लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
जस्तै : फोनको जानकारी ब्याट्रीको जानकारी, ब्याट्रीको हिस्ट्री, युजेज स्टाटिसटिक्स र वाईफाईको जानकारी
*2767*3855# यदि तपाईं आफ्नो एन्ड्रोइड फोनको फ्याक्ट्री रिसेट गर्न चाहनु हुन्छ भने यो कोड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । यसो गर्दा तपाईंको मोबाइलको सेटिङ र इन्टरनल मेमोरीमा भएका सम्पूर्ण डेटा डिलिट हुनेछन् ।
*#*#34971539#*#* क्यामेराको जानकारी लिनका लागि यो कोड प्रयोग हुन्छ । जब तपाईंले यो कोड डायल गर्नुहुन्छ तब त्यहाँ निम्नअनुसारको मेनु देखा पर्नेछ ।
1.Update camera firmware in image
2.Update camera firmware in SD card
3.Get camera firmware version
4.Get firmware update count
यसमध्ये पहिलो विकल्प भने प्रयोग नगर्न सुझाव छ । किन भने उक्त अप्सनमा क्लिक गरी सेटिङ गर्दा कहिले कहीँ तपाईंको क्यामेरामै समस्या आउन सक्छ ।
*#*#7594#*#* ‘कल इन्ड तथा पावर’ बटन परिवर्तन गर्नका लागि यो कोड प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
*#*#273283*255*663282*#*#* यो कोडले फोनको कपी स्क्रिन अन गर्नेछ । जहाँबाट तपाईंले आफ्नो फोनमा भएका फाइलहरुलाई ब्याकअप गरी राख्न सक्नुहुनेछ ।
*#*#197328640#*#* यो कोड फोनको सर्भिस मोड अन गर्न प्रयोग गरिन्छ । जहाँबाट तपाईंले विभिन्न कुरा परीक्षण गर्नुका साथै विभिन्न सेटिङ परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ ।
*#*#7780#*#* यदि तपाईं आफ्नो एन्ड्रोइड फोनको फ्याक्ट्री रिसेट गर्न चाहनु हुन्छ भने यो कोड प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ । यो कोडले गुगल अकाउण्ट सेटिङ, सिस्टम र एप्लिकेसन डेटा तथा सेटिङ र डाउनलोड गरिएका एप्लिकेसन पूर्ण रुपमा मेटाइदिनेछ ।
डब्लूल्यान, जीपीएस र ब्लुटुथका लागि सिकरेट कोड
*#*#528#*#* डब्लुल्यान परीक्षणका लागि
*#*#232338#*#* वाईफाईको म्याक एड्रेस हेर्नका लागि
*#*#1575#*#* जीपीएस परीक्षणका लागि
*#*#232331#*#* ब्लुटुथ परीक्षणका लागि
*#*#232337#*# ब्लुटुथ डिभाइसको एड्रेस हेर्नका लागि
*#*#8255#*#* जिटक सर्भिस मनिटर एक्टिभ गर्नका लागि
एन्ड्रोइडका अन्य विभिन्न फिचर परीक्षणका लागि
*#*#0*#*#* एलसीडी परीक्षण गर्न
*#*#0289#*#* एमोलेड परीक्षण गर्न
*#*#0283#*#* पकेट लुप ब्याक
*#*#0842#*#* भाइब्रेसन र पछाडिको लाइट परीक्षण गर्न
*#*#2663#*#* टच स्क्रिनको भसर्नका लागि
*#*#2664#*#* टच स्क्रिन परीक्षणका लागि
*#*#0588#*#* सेन्सरको प्रोक्सिमिटी परीक्षणका लागि
*#*#3264#*#* र्‍यामको भसर्न हर्नका लागि
कीबोर्डका १२ वटा फङ्सन की, कुनले के काम गर्छ ?
काठमाडौं । एउटा पुरा आकारको कीबोर्डमा जम्मा १०१ देखि १०५ सम्म की हुने गर्दछन् ।
अनलाइनबाटै एनआईसी एशियाको डेबिट कार्ड लिन सकिने, यस्तो छ तरिका
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले अनलाइनबाटै डेबिट कार्ड लिन मिल्ने सुविधा ल्याएकाे छ । समयअनुरुप
आईओएसमा नागरिक एपको नयाँ भर्सन, के-के भयो सुधार ?
काठमाडौं । एप्पलको एप स्टोरमा नागरिक एपको नयाँ भर्सनको अपडेट उपलब्ध भएको छ । दुई
४० करोड स्मार्ट डिभाइसमा हार्मोनी अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गर्दै ह्वावे
काठमाडौं । ह्वावेले विकास गरेको होङमेङ अपरेटिङ सिस्टमले प्रयाेगकर्तालाइ नयाँ अनुभव प्रदान गर्ने दाबी कम्पनीले
पोर्न उद्योगका लागि गोप्य क्यामेराको प्रयोग बढ्दै, महिला प्रत्यक्ष मारमा
नागरिक एपका लागि आफ्नै नाममा सिमकार्ड दर्ता गर्न टेलिकमको आग्रह, यस्तो छ नामसारी गर्ने तरिका
समयमै परियोजना सम्पन्न गर्न र गुणस्तर सुधारमा ध्यान दिन टेलिकम नेतृत्वलाई सञ्चार मन्त्रीको खबरदारी
प्ले स्टोरमा धेरै डाउनलोड हुन थालेपछि इरानमा सिग्नल एपमाथि प्रतिबन्ध
दूरसञ्चार क्षेत्रको अनुगमन गर्न अनलाइन मनिटरिङ र ट्रयाकिङ सिस्टम निर्माण हुँदै
६० विषयमा हुने निःशुल्क सीपमूलक तालिमका लागि अनलाइन आवेदनको म्याद थप